Adeegyada Hore Ee Adeegyada,Adeegyada Kaddib Fuzhou FMW Power Co.,Ltd.
1.Xaqiijinta hal sano ama 1200 saacadood (sida hadba kii ugu horreyntii la gaaro) laga bilaabo maalinta Taariikhda Dhismaha ee koronto-dhaliyaha.
2. Marka lagu jiro muddada dammaanadda, Awooda FMW wuxuu bixinayaa jenerayaha dhuxusha oo bilaash ah haddii uu jiro waxyeello soo gaartay by cilladaha qalabka korontada ama qalabka wax soo saarka . Awoodda FMW sidoo kale way awoodi kartaa u magacaabi khabiir tiknoolaji xirfad leh hanti-yaqaaniin hodan ah khibrad u leh Muuqaalka si uu u biimeeyo cayayaanka si wadajir ah ula macaamiisha mashiinka teknoolajiga.
3.FMW Qalabka tamarta ayaa lagaa jarayaa koronto-dhaliye kaddib xilliga dammaanadda ama kharajka dhaawaca ee uu abuuray macaamiisha muddada dammaanadda.
4. Wixii koronto ah oo ay ku jiraan mashiinka naaftada ', generator beddelayaasha, iyo habka kantaroolka, awoodda FMW waxay bixin kartaa dhammaanba nolosha ee korantada.
5. Waxaad guji kartaa si aad u hesho dheeraad ah qaybaha korantada ee qaybta korantada .
Adeegga Hore ee Sale
Ka dib markii lala xiriiro macaamiisha koronto yaqaan si ballaaran iyo by iyada oo tixgelineysa qayb kasta oo ka mid ah dalabka macaamiisha ', kooxda iibka ee FMW Awooda, kaas oo ka go'an iibka qalabka korontada iyo jeneraalayaasha korantada, si xirfad leh Macaamiisha u siiyaan xalalka tamarta dhaqaale iyo suurtogalnimada awooda tamarta korontada oo taageera kooxda adeegga farsamada xoogan. Ujeedada ugu dambeysa ee adeegga horay u sii iibinta waa in la kordhiyo faa'iidada macaamiisha ee kharashka ugu yar.
Soo iibinta Soo-saarista Adeeg
Kooxda raadinta wax soo saarka FMW waxay la socon doontaa hababka soo saarka ee dhammaan dhaliyayaasha amarrada, sida faahfaahinta tafaariiqda wax soosaarka, jadwalka wax soo saarka, lagu qiyaasay wakhtiga dhalashada, ka dibna wakhti go'an oo macquul ah macaamil kasta si gooni ah iyo gaar ahaan. Hubi waqtiga saxda ah ee dhaliyaha ee aasaasiga ah baahida macaamiisha.
Dhanka kale, kooxda kormeerka wax soo saarka ayaa sidoo kale soo gudbin doonta imtixaanka ugu dambeeya iyo waxqabadka warbixinta koronto-dhaliyaha ama beddel-bixiyeyaasha korantada, taas oo ay sameeyeen by xarunta imtixaanka iyada oo loo marayo imtixaan caadi ah oo nidaamsan oo matoor ah, ilaa macmiil kasta kahor bixinta si loo damaanad qaado tayada.
Ka dib iibka kadib Adeeg
1, Hagaajinta iyo Dejinta Dejinta
Marka macaamiishu helaan qalabka korantada ama koronto-bixiyayaasha, FMW Power wuxuu bixin doonaa rakibid waqti-gaaban ah oo internet-ka ah iyo diyaarinta horudhaca diyaarinta, iyo FMW Power waxay sidoo kale siin kartaa adeegyada gaarka ah haddii ay dhacdo baahida loo qabo, taas oo ah in lagu qoro khabiir teknoolijiyada injineernimada leh tiknoolajiyad taajir ah waayo-aragnimada goobta iyo ku-wareejinta rakibaadda goobta.
2, Tababar Shaqeeye
Haddii kaliya macaamilku u baahan yahay adeegyo tababar oo loogu talagalay hawlgalka koronto, annaga ayaa qabanqaabin doona tababarka shaqaalaha farsamada, oo ah tababar tabobar. The macaamil wuxuu shaqaalaha shaqaalaha farsamada u diri karaa warshad awoodda FMW si loogu tababaro ama FMW Awoodda waxay udiyaarin kartaa injineernimo farsamo xirfadeed macaamiisha 'meesha tababar shaqaalaha shaqaalaha farsamada.
Baaxadda ugu weyn ee tababarka:
Shidaalka ku haboon iyo kan saafiga ah, saliidda iyo cafimaadka qaboojiyaha.
Prestart diyaargarowga loogu talagalay garsoorka.
Bilowga / Jooji of gensets.
Wax ka qabashada ganset.
Dhaawac ah oo caadi ah jeermisyada dhuxusha.
3, Adeegga Dayactirka
Markasta iyo meel kasta oo ka mid ah burburka iyo qaladka koronto-dhaliyeha qalabka koronto-dhaliyaha ayaa dhacaya, awoodda FMW waxay siin doontaa noocyo xirfadle ah farsamo-la-talin iyo adeeg-farsamo oo aan dib-u-dhac lahayn. Ka dib kooxda adeegga FMW Power waxay sidoo kale abuuri doontaa aruurti shakhsi ahaaneed macaamiisha oo ay ku jiraan mid kasta iyo faahfaahin kasta oo ku saabsan koronto-dhaliyaha haddii ay jirto xaalad kasta isticmaalka gurmadka, iyo sidoo kale u diri doonaan ogaysiiska liiska baaritaanka joogtada ah, ogeysiiska qorshaha dayactirka koronto-dhaliyaha oo kaliya waqtiga macaamiisha.